Ukuphupha ngamalizo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Umnikelo wesisa uhlala ubizwa ngokuba "sisipho esithambileyo," esinokufunyanwa ikakhulu kwimvelaphi yesiGrike yeli gama. Ukwenza amalizo kunokuthi kuchazwe njengesipho somntu osweleyo okanye ongamkeli kakuhle. Umnikeli akalindelanga nayiphi na into ebuyayo evela kwabo basweleyo.
Umahluko phakathi komnikelo kunye nesipho sokulala uxhomekeke ikakhulu kwinkuthazo, kuba xa kufikwa ekunikezeleni ngamalizo, lowo uphiwayo unosizi ngalowo uwamkelayo. Kumaxesha amandulo, izityebi zazipha amalizo kwabangathathi ntweni emva kwentsasa yangeCawa. Ingcinga yokuba nemfesane ayidlalanga nje kuphela, kodwa abantu ngelo xesha bazithembisa ngethuba lokomoya. Kodwa abanye babeka amalizo abo kwibhokisi yomnikelo ukuze bayinike icawe.
1 Uphawu lwephupha «amalizo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «amalizo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «amalizo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «amalizo» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha «amalizo» ludla ngokufuzisela ilishwa okanye Mishap ebomini bokuvuka. Oku sele kwenzekile okanye kuya kwenzeka kungekudala ngephupha. Ke ngoko, kuya kufuneka uyilungiselele ngaphakathi le ntlungu. Abo bahambisa ngesisa amalizo emaphupheni abo, kodwa banokuncinane kubomi babo bokwenyani, banokukhangela phambili kumaxesha olonwabo kunye nokuphuculwa kwamathuba abo emali el mundo ukuvuka.
Nangona kunjalo, ukuba umntu osisityebi ngokuvuka ebomini uhambisa amalizo ephupheni lakhe, usekwixa elizayo. Ukuphazamiseka kunye neengxaki zemali ekhaya.
Ukuba umntu ufumana amalizo ephupheni, iziganeko ezingathandekiyo ezihlala zibonwa ziya kwenzeka kungekudala. Ezi azinakuthintelwa kwihlabathi elivukayo. Umphuphi kufuneka ke enze okona kulungileyo kwimeko yakhe.
Ukuba umntu olalayo ufumana iphupha, angathetha ngabahlobo abalungileyo nabahle. Impumelelo yeshishini ndijonge phambili. Kodwa le meko yamaphupha ikwabonisa ukuba uyakufumana uncedo kwabanye abantu kwimeko engxamisekileyo engummangaliso. Umbono womamkeli wesipho njengophawu lwephupha lubonisa ukuba, ebomini bokuvuka, kungekudala omnye umntu uza kucela uncedo kunye nesisa salowo uleleyo.
Uphawu lwephupha «amalizo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwimbono yengqondo, ukunika amalizo ephupheni luphawu lwe Ukulungela ukuzincama yokuphupha. Kwakhona, eli phupha licela oleleyo ukuba angangqinelani ngaphakathi. Kungenxa yokuba ngaphandle umntu sele enesisa, kodwa uhlala elindele umbulelo ofanelekileyo okanye into eyimbuyekezo. Umntu kufuneka ahlukane noku kwihlabathi lokuvuka kwaye afumane isenzo sokungazingci.
Yamkela amalizo njengoko umfanekiso wephupha ubonisa ngokwentetho yengqondo yephupha. Yintlungu komphuphi, engakwazi ukuyiphatha yedwa kwihlabathi elivukayo, abe ngumthwalo kwabanye okanye afune into
Ngapha koko, umntu ophuphayo kufuneka azi ngale meko yamaphupha ukuba woyika kakhulu ubunzima bezinto eziphathekayo. Ukuyinqanda okanye ukuyithintela, ungavuma ukwenza izinto ezininzi, ezinokubangela nehlazo. Umntu makazame ukufumana unobangela wolu loyiko lunzulu ekuvuseni ubomi. Emva koko kunokwenzeka ukuba uhlukane nale ngcinga yoloyiko.
Uphawu lwephupha «amalizo» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo lohlalutyo lwamaphupha, ukungqiba kusetyenziswa njengomqondiso we isicelo ngokomoya Itolikiwe